ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံးအဆို့တစ်ခုအပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' အက်ဒဝင်ဗန် De Gea ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ David De Gea ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောအဆိုပါ David De Gea အတ္ထုပ္ပတ္တိဇာတ်လမ်းစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:ဘ0အစပိုင်း
ဒါဝိဒ်သည်က de Gea ကင်တားနားဟိုဆေး De Gea (ဖခင်), ဟောင်းတစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဂိုးသမားနှင့်မာရီဗီကင်တားနား (မိခင်), အိမျကိုဂိုးသမားအားဖြင့်မက်ဒရစ်, စပိန်အတွက်နိုဝင်ဘာလ7၏ 1990th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
သူ့မိဘကသူတို့အစောပိုင်း 40 ရဲ့နဲ့သူ့မိသားစု၏တစ်ခုတည်းသောကလေးကအဖြစ်၌ကျင်လည်သောအခါသူကမွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea သူတို့၏သား pampered, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုသူမိမိတို့ကလေးအဖြစ်လိုအပ်သမျှကိုပေးကြ၏သာတဲ့သူကသူ့ချမ်းသာတဲ့မိဘထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။
လူငယ်တစ်ဦးကလေးသူငယ်အဖြစ်ဒါဝိဒ်သည်အားကစားဘို့မဟာမေတ္တာတော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်သူ၏မိဘများအထူးသဖြင့်မိမိအ mum, လေ့လာမှုများနှင့်အားကစားအကြားကျန်းမာချိန်ခွင်လျှာအကြောင်းကိုအများကြီးဂရုစိုက်။ သူတို့ကသူ့ကိုအကောင်းဆုံးကိုစပိန်လူငယ်အကယ်ဒမီ၏တဦးတည်းကြွယ်ဝဘဏ္ဍာရေး status ကိုကျေးဇူးတင်သည်သူ၏ဘောလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:အလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှဆက်နွယ်နေသော - သူ, La Escuela De Futbol အက်သလက်တီကို Casarrubuelos နှင့်အတူထွက်တော့တာပဲ။ Cruz, သူ့ဟောင်းဘောလုံးနည်းပြ, တခါများစွာသော David De Gea ချစ်သူများယုံကြည်ဖို့ခဲယဉ်းရှာတွေ့မယ်လို့ထားတဲ့သှားပွီး။ ပွုံးရောက်ကြပါ၏။ ဟုသူကပြောသည်, "သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘသို့နှစ်များ, ဒါဝိဒ်သည်တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဂိုးသမားမှ converting မတိုင်မီ 14 များ၏အသက်အရွယ်သည်အထိပြီးပြည့်စုံ outfield ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ " yeah အိုး, သင်ကညာဘက်တယ် !! ။ သူစတင်ခြင်းကနေရည်မှန်းချက်ဂိုးသမားဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤတွင်သူသည်သူ့အဖွဲ့နှင့်အတူဓာတ်ပုံတွေယူပြီးထူးခြားတဲ့တောက်ပဆံပင်ရွှေရောင်ဆံပင်နှင့်အတူသာ6ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင်
လိုအပ်တဲ့အခါဒါဝိဒ်သည်လည်းကြိမ်မှာမိမိကျောင်းကအသင်းများအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ အောက်ကပုံထဲကစပိန်ပြန်ရေးစင်တာကသူ၏လူငယ်တစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားနှင့် utility ကိုကစားသမားအဖြစ်အသှေးကောငျးပြသခဲ့သည်။ လိုအပ်တဲ့အခါသူလုံးဝနီးပါးအားလုံးရာထူး (ကာကွယ်ရေး, ကွင်းလယ်နှင့်တိုက်ခိုက်မှုအခန်းကဏ္ဍ) ကစားနိုင်ဘူး။ ဒါဝိဒ်သည် 14 များ၏အသက်အရွယ်, သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်တစ်ဦးအလှညျ့အပွောငျးသတ်မှတ်သောအသက်အရွယ်သည်အထိတစ်ဦး outfield ကစားသမားဖြစ်ဆက်ပြောသည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် - အစောပိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးနေ့ရက်များ
6 ပေ4သူ့ရဲ့အစဉ်အဆက်ကြီးထွားလာအမြင့်တစ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်သူ၏အမြန်နှုန်းကန့်သတ်။ မိမိအဖေရဲ့အခွရောကိုလိုကျနာဖို့ရှာပုံတော်နှင့်အတူ coupled, ဒါဝိဒ်သည်ဘဝတစ်ရည်မှန်းချက်ဂိုးသမားကူးပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူသည်မိမိအရပ်ရှည်ရှည်အမြင့်အသုံးပြုသွားမည်ရှိရာဘေးဖယ်ရည်မှန်းချက်စောင့်ရှောက်, ဒါဝိဒ်သည်လည်းဘတ်စကက်ဘောပါဝင်ခဲ့။
David De Gea- မြို့အတွက်တဦးတည်းအချိန်နောက်ဆုံးပေါ်ရည်မှန်းချက်ဂိုးသမား
De Gea တိုင်အောင်တဆယ်လေး၏အသက်အရွယ်ကအပြည့်အဝအချိန်ဂိုးသမားအဖြစ်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ သူကစပိန်အတွက်လူငယ်ဆုဖလား၏အများဆုံးအနိုင်ရခဲ့သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ De Gea ရဲ့လူငယ်အသင်းမှာမရှောင်သာဖလားကက်ဘိနက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံဖြစ်ပါတယ်။
De Gea ရဲ့လူငယ်အသင်း, la Escuela De Futbol အက်သလက်တီကို Casarrubuelos မှာမရှောင်သာဖလားကက်ဘိနက်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea လူငယ်အသင်းကိုဆုဖလား
အဖြစ်မကြာမီထိုလူငယ်ဂိုးသမားပိုကြီး challanges အဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်သကဲ့သို့သူသည်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှအကြီးတန်းအဖွဲ့ join ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ကြောင့်မိမိအကြီးမားအခွက်တဆယ်ဖို့ De Gea 17 ၏အသက်အရွယ်မှာပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
2011 သည်ဒါဝိဒ်အတွက်ပိုကောင်းဘို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏တိုင်းပါရမီကစားသမားသည်, မိမိအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်မျှော်လင့်ကြောင်းသွေးဆောင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သည်ဒါဝိဒ်၏အသစ်အကလပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသူတို့နှင့်အတူရေရှည်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ De Gea ဒဏ္ဍာရီအစားထိုး ဗန်ဒါဆား အနားယူအပြီး။ ကလပ်မှာမိမိစွမ်းဆောင်ရည်က 'အမည်ပြောင်မှဦးဆောင်အက်ဒဝင်ဗန် De Gea '' ။ သူတို့ပြောသကဲ့သို့အရာကြွင်းလေ, သမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်: မိသားစုဘဝ
ဒါဝိဒ်သည် De Gea မိသားစုနောက်ခံ သိ. ကျိုးနပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူကရည်မှန်းချက်အစောင့်အထိန်းတစ်ဦးချမ်းသာကြွယ်ဝနေအိမ်ထဲကနေလာပါတယ်။ ဖခင်ဟိုဆေး De Gea သည်သူ၏စူပါကယ်တင်ဘို့လူသိများ Getafe တစ်ခု ex- ဂိုးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ 1983-84 ရာသီ၌မိမိတို့ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်း Getafe မှစုဆောင်းပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်ဂိုးသမားအကြားခဲ့ပါတယ်။ ဖခင်နှင့်သားနှစ်ဦးစလုံးအသက်ရှင်ရည်မှန်းချက်စောင့်ရှောက်၏လုပ်ရပ်မှုတ်။ သူကအရမ်းတောင်းဆိုမှုများကြောင့်ဟိုဆေး, သူ့အဖေကသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးနည်းပြဖြစ်ပါတယ်။ အက်သလက်တီကိုမှာ, သူသည်မိုးရွာရွာ, လေတိုက်သို့မဟုတ်ဆီးနှင်းသည်ဂိမ်းဒါပေမယ့်လည်းတိုင်းတစ်ခုတည်းသင်တန်းမှာခဲ့ပါတယ်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ရဲ့မိခင်, မာရီဗီကင်တားနားအားလုံးသူမ၏ဘဝတအိမ်ဂိုးသမားဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ခင်ပွန်းနှင့်သာသား / သူငယ်၏ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုတာကိုအောကျမေ့နေသည်။ မာရီဗီကင်တားနား '' ပညာရေးနှင့်အားကစားအကြားတန်းတူချိန်ခွင်လျှာ '' တစ်ဦးထောက်ခံသူဖြစ်ပါတယ်။ သူမကသူမ၏သားအဘို့လိုချင်ဒါက။
အောက်ကပုံထဲမှာမြင်ကြသည့်အတိုင်းမိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ 60 ရဲ့ရှိပြီးသားဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ 40 ရဲ့၌မိမိတို့သားခဲ့သညျ။ နှစ်ဦးစလုံးတွင်နေထိုင်ကြသည် Toledo, အလယ်ပိုင်းစပိန်အတွက်မြို့နှင့်မြို့တော်စည်ပင်က။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea မိသားစုနောက်ခံ
ဒါဝိဒ်သည်တစ်ချိန်ကပြန်ပြောပြ; "အကြှနျုပျ၏ mum, နှစ်, သုံး, လေးဆယ့်ရက်သတ္တပတ်အထိကိုခေါ်လိမ့်မယ်။ သူမသည်အစဉ်အမြဲသူမငါ့ကိုအကြောင်းကိုအလွန်စိုးရိမ်င်ကဆိုသည်။ သူမသည်အစဉ်ငါ့လေ့လာမှုများနှင့်အားကစားအကြားချိန်ခွင်လျှာစိတ်ပူခဲ့သည်။ ကျွန်မမိဘတွေပဲ Alarcon ၏ plush ဧရိယာ "တွင်အက်သလက်တီကိုရဲ့လေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်မှာငါ့ကိုကြည့်ယူလာ 50km တစ်ရက်မောင်းထုတ်လိမ့်မယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့်, သူ့မိဘများ၏ထောက်ခံမှုကိုသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်လူတစ်ဦးမှဆာပဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍသူတို့ကိုသိသောရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများအကြားသိသာသည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:relationship ဘဝ
ဒါဝိဒ်သည် De Gea အရေးအသား၏အချိန်ကအဖြစ်ကို un-လက်ထပ်သည်။ အဆိုပါ Spanard အတူလေးနက်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ဟု Edurne Garcia Almagro အဘယ်သူသည်သူ့ကိုထက်5နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်။
Edurne တစ်စပိန်အဆိုတော်တစ်ဦးမင်းသမီးနှင့်သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကလူမှုရေးစာရင်းစစ်တက်ရောက်ခြင်းအတွက်လူသိများသူတီဗီတင်ဆက်သူဖြစ်ပါတယ်။9၏အသက်အရွယ်မှာသူမစပိန်သားသမီးရဲ့ဂီတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည် Trastos ။ သူမကစပိန်သတ္တုများပုံသွန်းပြပွဲOperación Triunfo အတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသည့်အခါနှောင်းပိုင်းတွင် 2005 အတွက်ကျော်ကြားမှုမှထ 2006 အတွက်ဆဌမအရပျ၌ကိုလက်စသတ်။
သူတို့ဟာသေးလက်ထပ်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အနာဂတ်အတွက်ထိုသို့စဉ်းစားနေကြသည်။ သူတို့ကိုသိရှိသူလူတိုင်းစုံလင်သောစုံတွဲအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်သည်။ ဒါဝိဒ်သည် De Gea Edurne မှလွဲ. သည်သူ၏အသက်တာ၌မဆိုမိန်းကလေးရက်စွဲပါဘယ်တော့မှသိရသည်။ သူမ၏အဆိုအရ;
"ဒါဝိဒ်နှင့်ငါအတူတူအလွန်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ရည်မှန်းချက်စောင့်ရှောက်ကတိကဝတ်အတူတက်ချည်ထားခဲ့ပြီသူ့ကိုရှိနေသော်လည်းသူ့အဘို့အစဉ်အမြဲရှိပါ၏။ သူနေဆဲငါ့အဘို့အရည်အသွေးကောင်းအချိန်ကိုတွေ့။ "
Edurne နှင့်အတူ David De Gea ရဲ့သီချင်း Love Story
ဒါဝိဒ်နှင့် Edurne မကြာခဏအတူတကွပါတီများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအားကစား function ကိုတက်ရောက်ကြပါတယ်။ လူတသူရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆန္ဒရှိမည်မျှအချိန်အားဖြင့်သူမ၏ခစျြတယျဆိုရငျအမှန်စင်စစ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ ဒါဝိဒ်သည် Edurne သုံးစွဲ Moni အနတ္တဖြစ်၏။ ဒါဟာအဖိုးမဖြတ်နိုင်ကြောင်းသုံးစွဲသည့်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea Girlfriend Edurne နှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အချိန်သုံးစွဲ
ဖယ်လ်ကာအို, Mata ကို, Antoine Griezmann နှင့် ရောဘတ် Lewandowski ဒါဝိဒ်သည် De Gea နဲ့တူဆင်တူချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မျက်စိချွတ်ယွင်း
ဒါဝိဒ်သည်က de Gea farsightedness များအတွက် mediacal သက်တမ်းဆိုလိုတာက hyperopia ရှိပါတယ်။ ဒါဟာဝေးလံသောအရာဝတ္ထုကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာအနီးတွင်ဖြစ်ကြောင်းအရာဝတ္ထုထက်ထင်ရှားစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်သည်မျက်စိအလင်းယိုင်အမှားတစ်ခုဘုံအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
သူကအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးကျီအဘယ်ကြောင့်ဒါဝိဒ်သည် De Gea ရဲ့မျက်လုံး Defect-
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မိမိအစူပါအေးဂျင့်
Jorge Paulo Agostinho Mende (7 ဇန်နဝါရီလ 1966 မွေးဖွား), ပိုကောင်း Jorge Mende David De Gea ရဲ့အေးဂျင့်ဖြစ်ပါတယ်ရိုးရိုးအဖြစ်လူသိများ။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ရဲ့ Agent- Jorgie Mende
Mende clients များအပါအဝင်အတူကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးဘောလုံးအေးဂျင့်များအကြားဖြစ်ပါသည် စီရော်နယ်ဒို, ဒါဝိဒ်က de Gea, ဒီယေဂိုကော်စတာ, ဂျိမ်း Rodriguezနှင့် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို. Mende မကြာခဏa"ကိုစူပါအေးဂျင့်" အဖြစ်ရည်ညွှန်းတယ်။ သူက client များအဖြစ် 102 သည်အခြားဘောလုံးသမားများရှိပြီး $ 1 ဘီလီယံ၏ပေါင်းလဒ်တန်ဖိုးရှိကန်ထရိုက်စာချုပ်များကိုင်တွယ်ပါပြီ။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:သူ့ကား
David De Gea ဟာ Captiva မောင်း - Chevrolet ကားထုတ်လုပ်သော SUV ကား ($ 50.000)
David De Gea's- Chevrolet ကား
မတူဘဲ Raheem Sterlingသူကကားတွေ, ထိုရက်သတ္တပတ်၏အသီးအသီးနေ့အဘို့တွင်တစင်းကိုရှိခြင်းရန်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ ဒါဝိဒ်သည်အလွန်အဆင်ပြေသည်မိမိနှင့်အတူရှိသူတစ်ဦးရိုးရှင်းတဲ့သူဖြစ်၏ Chevrolet ကား Captiva.
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ရဲ့ Chevrolet ကား Captiva ကား
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:သူ့အိမ်
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ၏အိမ်တော်£ 2.75m တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံကိုအောက်တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea Mansion
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:မိမိအရှေးအကျဆုံးမိတ်ဆွေ
ဒါဝိဒ်၏အသက်အကြီးဆုံးမိတျဆှေထက်မကအခြားလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် kun အဂွဲရိုးသည်.
Kun အဂွဲရိုးသည်အတူဒါဝိဒ်သည် De Gea ရဲ့ဟောင်းများကိုချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု
သူနှင့်အတူတကယ်ကောင်းကောင်းပေါ်တယ် kun Athletico Madrid အသင်းမှာသူတို့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်း။ နှစ်ဦးစလုံးပြန်ပြီးတော့အတူတူနေတဲ့အခန်းတစ်ခန်း shared ။ မဟုတ်သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောနေအိမ်များမတတ်နိုင် coudn't ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချင်းချင်းမျှဝေနီးကပ်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၏။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ရှေးအကျဆုံးအလုပ်ရှာဖွေရေးမိတ်ဆွေ
ဒါဝိဒ်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါအဲဒီအချိန်တုန်းက Athletico မှာ, သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဗီဇတစ်ဦးအမြန် pass ဖြစ်သို့မဟုတ်သတ်မှတ်ထားဖို့ပစ်မယ်ဆိုတာ kun ပျောက်စေးအပေါ်သူ့အဖွဲ့အိမ်ထောင်ဖက်မဆိုထက်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်:ဆံပင်ပုံစံ
ဒါဝိဒ်သည်လညျးမိမိပိုသာမန် Mohawk ဆံပင်အဘို့အကျော်ကြားသည်။
ဒါဝိဒ်သည် De Gea ဆံပင်ပုံစံ
လုံးဝအသီးအသီးအခြမ်းကနေရိတ်ဆံပင်ရှိခြင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်များနှင့်အတူ David De Gea အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားဘုံကိုဆည်းပူးခဲ့ကြကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ ဒါဟာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်အကြံပြုအဖြစ်ရှင်ပေါလု Pogba ၏အောက်ပါပိုနွယ်ဖွားပေါ်လာသည်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်မိတ္တူ David De Gea ရဲ့ဆံပင်
ISCO ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Xavi ဟာနန်ဒက်ဇ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်